Tamarta iyo Nukliyeerka - Hengshui Jrain Frp Co., Ltd.
Sanadihii la soo dhaafay, xeerarka deegaanka ee kordhay waxay horseedeen tamarta korantada dhuxusha inay raacdo tikniyoolajiyad cusub oo lagu xoqo. Teknoolojiyad xoqidda gaaska qoyan (FGD) xoqidda teknolojiyada waxay ku lug leedahay xaddiga dhifka leh ee burbursan kaasoo dillaaci kara oo dabiici ahaan dumaya.
Marka la barbar dhigo birta kaarboon iyo aluminiin ah, fiberglass balaastigga lagu xoojiyay (FRP) waxaa la ogaaday inuu yahay xalka agab la isku halleyn karo oo qiimahoodu sarreeyo.
Daraasadaha qaarkood waxay muujiyeen in wax soo saarka ay ka kooban yihiin waxyaabo isku dhafan ay isticmaalayaan wax ka yar laba jeer tamar marka la barbar dhigo aluminiinta biraha iyo maadada la taaban karo.
Qiimaha waxsoosaarka iyo dayactirka ayaa aad u hooseeya marka loo eego qalabka caadiga ah.
Sidaa darteed FRP waxay qayb muhiim ah ka noqotay howsha saldhigyo badan oo dhalinta tamarta.
Baahida loo qabo badeecadan ayaa si xawli ah u koraya maadaama baahida loo qabo ay kordhayaan, una baahan xalal badan oo iska caabin ah.
Alaabada muraayadaha muraayadaha indhaha ee warshadaha kuleylka ah iyo warshadaha nukliyeerka ayaa ah xirmooyin fiberlass ah oo buuxa oo bilaash ah, xariiqyo la taaban karo oo bir ah iyo xirmooyin bir ah, xirmooyin bir ah oo ay ku jiraan xirmooyinka fiberlass / chimney, tuubbooyinka, haamaha kaydinta iyo maraakiibta, xoqo, nidaamyada dib-u-warshadaynta tuubooyinka, tuubbooyinka kaabayaasha ah, tuubbooyinka biyaha qaboojinta , nidaamyada buufin, xijaabyada, munaaradaha, ur-urta iyo maraakiibta hawada sifeeya, dareeraha, iwm.
Waxaa loo qaabayn karaa:
- Adeegyada fuuq-baxa
- Adeegyo fara badan
- Adeegyada qalliinka
- Adeeg heerkul sarreeya
- Adeeg dab-celinta dabka si loo gaarsiiyo heerka 1aad olol fidinta
Maaddaama tamarta korantadu ay kalsooni ka heshay FRP iyada oo lagu guuleystay in la xaqiijiyo, codsiyada FRP way sii fidayeen hawsha.
Xirmooyinka jrain iyo nidaamyada xirmo munaaraddu waxay bixiyaan iska caabin kiimiko waana kuwa miisaanka u ah fududeynta iyo rakibidda. Waxay cimilada u adkaystaan ​​oo ay fududahay in la joogteeyo oo leh jaakad jilicsan oo muddo dheer sii soconaysa iyo ilaalinta UV. Natiijo ahaan, waxay si aad ah ugu habboon yihiin warshadaha kuleylka iyo nukliyeerka.
Iyada oo ku saleysan khibradaheeda sanadeed ee badan ee u adeegida suuqan, Jrain waxay leedahay awooda qaabeynta, soosaarida, rakibida iyo u adeegida FRP iyo alaabada labalabeynta ee baahidaada gaarka ah.
Heerarka caalamiga ah ee uu Jrain raaci karo waxaa ka mid ah ASME, ASTM, BS, DIN, iwm.
Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Caaryada, Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee FRP,